(Last Nohavaozina: 19/06/2020)
Raha ny tena izy, Saika ny kolontsaina rehetra kafe tany Eoropa sy ny tandrefana izao tontolo izao dia avy Italia. Izany no antony fitsipika samy hafa rehetra karazan-kafe no misotro manana Zavatra anarana.
Any minitra vitsy 'tongotra avy ao amin'ny gara Milan any Italia Cafe ity dia araka ny marina momba ny anarany. Misy saka mandeha manodidina ity Cozy kafe raha mitoetra mihinana sy misotro. Ity kafe mahafinaritra ity dia malaza amin'ny fisianana dite tsara izay notompoina tao anaty fitoeran'orinasa saka ary nanana mofomamy matsiro. Ny tehinao, ireo faran'izay sariaka sy ny ankamaroan'ireo foana ny saka matory, izao no izay tia ny hatao.
Raha mitady mba hahitana izay tena lehibe momba ny kafe italiana, izany no toerana mba hitsidika. Ny maro be namboarina Kafe sy matsiro tsakitsaky manao izany kafe toerana malaza ho an'ny mpizaha tany sy ny mponina. Izany dia toerana lehibe mba hanana sakafo maraina, ary mivarotra ny sasany Kafe ho Euro na latsaka. Ity tsena kafe no seza misy kodiarana azo idirana, manana WIFI, dia Pet-friendly ka dia izy no tsara ahitana faritra feno fisotroana toaka. A fito minitra tongotra avy any amin'ny gara.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/coffee-shops-train-stations-in-italy/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
I miasa amin'ny famoronana, mpandraharaha amin'ny aterineto mba hampitombo ny marika hafatra sy afa-po izay milaza ny tantara ho an'ny olona tsara. Ny fomba hanaovana izany dia amin'ny alalan'ny tsoratra, tsara-tsoratra, hanintona sy ny mpanatrika-centric afa-po, na, fara fahakeliny, izany no mihevitra aho fa :) - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho
Nandeha lamasinina, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Travel Europe
Top 3 Eoropa lalamby manompo tsara Food
Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Train Travel UK, Travel Europe